Health Sarokar | सेल्फ मेडीकेशन- चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधिको प्रयोग कति ठिक, कति बेठिक?
Prescribing cascade- What role can you play asapatient?
२५ वर्ष नपुगेकाले मदिरा किन्न र सेवन गर्न नपाइने
Can your mobile phone transmit COVID-19?
Treating COVID-infections withacentury old method
Coronavirus alert- Blood group A more vulnerable
कोरोनाभाइरस सम्भावित विश्वव्यापी महामारी- थप तयारी जरुरी
Children miraculously less vulnerable to COVID-19 infections
COVID-19: Highly contagious but less fatal
सेल्फ मेडीकेशन- चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधिको प्रयोग कति ठिक, कति बेठिक?
नेपाली समाजमा आफू अलिकति अस्वस्थ हुँदा आफूले पहिले त्यस्तै समस्यामा प्रयोग गरेको औषधि चिकित्सकको सल्लाह बिना नै सेवन गर्ने चलन छ। यसरी चिकित्सकको सल्लाह नलिई औषधि सेवन गर्नुलाई अङ्ग्रेजीमा ‘सेल्फ मेडीकेशन’ भनिन्छ।
मानिस आफू अस्वस्थ हुँदा यसरी औषधि सेवन गर्ने बानीलाई सामान्य मानिन्छ। मलाई सन्चो होस् भनी सोच्नु र त्यसका लागि आफैले बुझे अनुसार औषधिको प्रयोग गर्ने बानी नेपाली समाजमा मात्र होइन संसारका अन्य मुलुकका मानिसमा पनि देखिन्छ ।
‘सेल्फ मेडीकेशन भनेको सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू पर्दा चिकित्सकको सल्लाह विना पनि प्रयोग गर्न मिल्ने केही सुरक्षित र प्रभावकारी औषधिको सेवन गर्नु हो’। धेरै बिकसित राष्ट्रहरूले त्यहाँ पाईने औषधिलाई ओ.टि.सि.(Over The Counter) र पि.ओ.एम.(Prescription only Medicines)मा बर्गिकरण गरेको पाईन्छ। ति देशहरूमा ओ.टि.सि. औषधि मात्र सेल्फ मेडीकेशनका लागि भनेर प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि औषधिलाई क, ख, र ग वर्गमा विभाजन गरिएको छ। “क” वर्गमा पर्ने औषधि वर्षौ देखि चली आएका र डाक्टरको सल्लाह विना प्रयोग गर्दा पनि सुरक्षित भनी प्रमाणित भएका ओ.टि.सि. औषधि हुन्। केवल यस्ता “क” वर्गमा पर्ने औषधि आम मानिसले स्वक्षिक रूपमा सेवन तथा प्रयोग गर्न मिल्ने औषधि हुन्। तर हाम्रो देशमा अहिले पनि कुलतमा फस्न सक्ने केही नियन्त्रित औषधि बाहेकका औषधि निर्बाध रूपमा डाक्टरको पुर्जा वा प्रेस्क्रिप्शन विना खरिद गरी प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यसैले पनि यहाँ सेल्फ मेडीकेशन अलि खतरनाक साबित हुन सक्दछ।
नेपालमा मात्र नभई धेरै जसो विकाशाेन्मुख राष्ट्रहरूमा यो समस्या छ। नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ देशभरि सबै तिर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच राम्रो नभएकाले गर्दा पनि हामी माझ चिकित्सकको सल्लाह विना औषधिको प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता नै जस्तो रहेको छ । तर दूर दराज ठाउँको यो बाध्यात्मक बानी यहाँका स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच हुने ठाउँमा पनि अझ जीवित देखिन्छ।
हामीले आफूले आफूलाई के भएको भनी केही मात्रामा त बुझ्दछौ तर हर कोहीले तपाई हामीलाई के भएको भनेर बुझ्न त्यति सजिलो भए त बर्षौ पढेर र बिरामी जाँचेर बस्ने चिकित्सकको खासै काम हुँदैन थियो होला। रोगको सही पहिचान गर्नका लागि डाक्टर जति शिक्षित र उपयुक्त व्यक्ति अरू कोही हुन्न भनेर हामीले मनन गर्नु पर्दछ। तर पनि हामी बिरामी हुँदा साथीभाइ छरछिमेकको सल्लाह अनुसार पनि औषधिको प्रयोग गर्न पछि हट्दैनौ । सायद पहिले पहिले नेपालमा डाक्टर थोरै भएकाले गर्दा र भेट्न नै गाह्रो हुनाले गर्दा यस्तो बानी लागेको हुनु सक्छ । तर अहिले सहर बजारमा त बिरामी पर्दा डाक्टर भेट्न खासै गाह्रो छैन । र पनि हामीले आफ्नो पुरानो बानी छोड्न सकेका छैनौ बरु हाम्रा भावी सन्ततिमा पनि सोही बानीको विकास गराउँदै छौ। केही सामान्य अवस्थामा बाहेक उचित उपचारका लागि चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्दछ।‍
औषधिको सही प्रयोग गर्दा यो बानी उपयोगी हुन्छ भने प्रयोग यदि गलत भएको खण्डमा यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नै प्रतिकूल रूपमा हानि पनि पुर्‍याउन सक्दछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। हामीले के पनि याद गर्नु पर्दछ भने बजारमा पाईने हजारौ औषधि मध्य केहि "उच्च जोखिमयुक्त औषधि" पनि हुन्छन्, जसको प्रयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलेनै संयमता पुर्वक गर्नु पर्ने हुन्छ।
हामी भन्ने गर्दछौ मानिस सामाजिक प्राणी हो । तर मानिस मात्र एक त्यस्तो प्राणी हो जो औषधि सेवन गर्न इच्छुक हुन्छ। हुन त हामी मानिस बौद्धिक प्राणी भएकाले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने प्राणी मानिन्छौ । तर एक पटक सोचौँ त हामीले प्रयोग गर्ने गरेका औषधिको बारेमा हामीलाई कत्तिको थाहा छ रु हामी धेरै जसो मानिसलाई आफूले प्रयोग गर्ने औषधिको ब्रान्ड नाम बाहेक गेनेरिक नाम सम्म पनि थाहा हुँदैन।
औषधि सेवन गर्दा त्यसले गर्ने अपेक्षित काम एउटा हुन्छ भने सँगसँगै केही अरू अनपेक्षित साइड इफेक्ट पनि हुन्छ । केही औषधि सही प्रयोग नहुँदा त अझ धेरै हानी पुर्‍याउन सक्ने पनि हुन्छ । र त्यसै कारणले गर्दा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शन विना सेवन गर्न नहुने भनेर छुटाइएका हुन्छन्।
फेरी डाक्टरले सधैँ औषधि दिनै पर्छ भन्ने पनि होइन । एक युरोपियन दार्शनिक तथा डाक्टर सर विलियम ओस्लेरले भनेका थिए ‘डाक्टरको एउटा पहिलो काम भनेको जनमानसलाई कस्तो बेलामा औषधिको प्रयोग नगर्ने भनेर शिक्षा दिनु हो।’ त्यसैले बिरामी पर्ने बित्तिकै औषधिको सेवन गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। हाम्रो देशमा कोही मैले अझ सम्म कुनै औषधिको प्रयोग गरेको छैन भन्ने पनि भेटिन्छन् भने कोही सानो भन्दा सानो समस्यामा पनि औषधि सेवन गर्ने बानी भएका पनि भेटिन्छन्।
चिकित्सकको सल्लाह विना औषधिको प्रयोगले गर्दा अहिले एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणु बढिरहेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। साथै सेल्फ मेडीकेशनले फजुल खर्च हुने, रोग लम्बिने र अनेकौँ विपरीत असरहरू देखिने समस्या हुन्छ।
अब हामी औषधि सेवन गर्नु अघि अलि सतर्क हुने हो कि ? हामीले आफू पुनः स्वस्थ हुनका लागि सेवन गरेको औषधिले हामीलाई झन् अस्वास्थ्य त बनाइरहेको छैन ? अहिले म औषधि सेवन गर्दै छु निको भई हाल्छ नि भनेर चिकित्सकलाई जँचाउन झन् ढिलो गरेर रोग पाली रहेका त छैनौ ? हामी आफै सतर्क हुनु पर्दछ ।
संजय मणि दीक्षित
सहायक प्राध्यापक (फार्माकोलोजी)
काठमाडौं मेडिकल कलेज
Gmail : hsarokar@gmail.com
Health Sarokar Tv
CopyRight @ 2020 Health Sarokar. All Right Reserved.